Inkampani Yethula Karcher wamukelekile eseyintsha - vacuum cleaner nge aquafiltering Karcher DS 6000
Homeliness, Amathuluzi kanye nemishini
Karcher Inkampani ekhiqizwa iminyaka eminingi eyodwa kuphela, imodeli yimpumelelo kakhulu vacuum cleaner ngamanzi lemifanekiso, okungukuthi Karcher DS 5600. Nge moditsikatsiyami ezincane. Ngokwesibonelo, DS 5600 Mediclean ifakwe ikhanda Turbo ezingasho okusha okuthuthukisiwe HEPA-zokuhlunga.
Futhi iminyaka eminingi, abalandeli sha kanye ebesilokhu sikulindile izindaba kuleli qembu ovelele - Umholi ekuvuneni ubuchwepheshe. Futhi walinda. Akunjalo kudala Karcher obyavilf ngokusemthethweni kwethulwa elisanda akvapylesosov, okuzokwenza iqhubeke emgqeni ezimhlophe amadivayisi abo amasha - Karcher DS 6000.
Karcher DS 6000- uyisibonelo ezintsha ebezingekho cleaner wezindlu aquafiltering. umehluko yayo eyinhloko ikusize. Abakhiqizi munye imodeli Karcher DS amandla 6000 ukuncela okusezingeni eliphezulu futhi yehlise amandla ukusetshenziswa. cleaner wezindlu motor has a amandla 900 W, okuyinto 35% (!) ngaphansana amandla yangaphambili cleaner onobuhle wezindlu.
Izinzuzo izici eseyintsha
Imodeli Karcher DS 6000 inikeza filtration multi-esiteji. Isigaba 1 - ukuhlunga amanzi esigabeni 2 - Teflon isihlungi esiteji 3 - HEPA isihlungi 13. Lesi sihlungi unekhono engcono ukugcina izinhlayiya, ngokungafani kuya kweminye imihlobo.
I onjiniyela kunakwe yokuthi abesifazane abaningi basebenzisa vacuum cleaner. Yingakho ziye zanciphisa isisindo vacuum cleaner, manje isisezweni kg 7.2 kuphela. Imodeli isibe emfishane. Thola indawo ukugcina vacuum cleaner ilula, ngoba manje ukuze ubeke kuthatha isikhala okuningi ngokuncane. Karcher DS Model 6000 kwaba ezinzile mobile ngokusebenzisa design 4-wheel izindlu, omunye pair of amasondo iqinile, eyesibili - iwaphe-.
Izingxenye kanye nesakhiwo nezimpawu
Ngo isethi cleaner wezindlu kuhlanganisa zonke izinhlobo amathiphu evumela wokuhlanza kanzima ukuze afinyelele amakhona egumbini. I tube ukuncela kuyinto adjustable ubude, okuvumela ukuba ulungise vacuum cleaner ngaphansi ukuphakama yimuphi yomsebenzisi, okwenza yokuhlanza elula kakhudlwana.
Vacuum cleaner ine ikhebula side kagesi, it ikuvumela ukuba ixhume ku amapayipi egumbini elilodwa futhi ushanela lonke efulethini. Sebenza vacuum cleaner Karcher DS 6000 kulula njengokuhlola nge imodeli odlule - kwagadla ongenambangi №1 minyaka eyishumi edlule Karcher DS 5600: ngaphambi kokuvuna uthele amanzi ahlanzekile, bese uthele umsebenzi ezingcolile.
Nneskolko amazwi mayelana nenkampani Karcher
Karcher Inkampani usebenza emakethe umthengi futhi imishini yobuchwepheshe ukuze bahlanze iminyaka engaphezu kwengu-50.
Phakathi nalesi sikhathi, onjiniyela yenkampani zemukeliswe izinto ezintsha ezifana ingcindezi washers, umusi zokuhlanza, cleaner zokuhlanza nge lemifanekiso amanzi, Umshini zokuhlanza isitimu polishers nezinye ewusizo eziningi ekuphileni kwansuku zonke futhi umsebenzi okhokhelwayo amadivayisi ezenza vacuum emhlabeni. Yileyo esithi inkampani, egama layo linguJehova lahlotshaniswa nokuba nokwethenjelwa lula ukusetshenziswa.
Izinto Composite, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwazo isicelo
Wonder kuhhavini kagesi for izitsha engavamile
Oshiselelayo "Resanta" - igama elisha emkhakheni zokushisela
Espa futha: intengo, ukubuyekeza imifanekiso kanye nokubuyekeza
Flanged ibhola valve: ububanzi
Umshini i imimese imimese - blade ngokuphelele bushelelezi
Slotted afanayo: izinhlobo kanye injongo
Elshad Babayev, umlobi "Sin City": Biography futhi amaqiniso athakazelisayo
Ezhemalina. Ukhula Othandweni endaweni engadini
BB-Cream naseVichy: ukubuyekezwa kanye izincomo oyisebenzisayo
Inzuzo yokufihla impilo yabantu
Samara labantu - kungani kuyehla
Ubukhulu Novgorod. Izici Zabantu ubukhulu Novgorod
"Ethi Alice in Wonderland" movie. izingcaphuno
Storm amanzi - kudivayisi
Jwayelekile usayizi wesibeletho kwabesifazane ngaphambi futhi emva kokubeletha
№191 Polyclinic (eMoscow). Uphenyo odokotela, ikheli, Amahora okuvula
Yiziphi izinto wamazinyo?